VaTsvangirai Vanoti Vari Kubviswa Mavagere Vanofanirwa Kuripwa Zvakakodzera
Gumiguru 02, 2012
Mutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai.
CHIPINGE — Vagari vekuChisumbanje kuChipinge South vanoti vanotambira nemufaro mashoko emutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, ekuti kambani yeMacdom Investments inosungirwa kupa vagari ava muripo unoenderana neminda yayakatorerwa vagari .
Kambani iyi iri kutora minda yevanhu mushure mechibvumirano chayakaita nehurumende, kuitira kuti irime nzimbe muminda iyi.
VaTsvangirai vakatiwo kambani iyi inofanirwa kupa vana vemunharaunda iyi mabasa muminda yenzimbe dzainoruma.
VaTsvangirai vakataura mashoko aya nemusi weChina kwaRimbi pakuvingwa kwaseneta weChipinge, VaJosiah Rimbi. VaTsvangirai vakati zvakare kambani iyi inofanirwa kuwanira vana vemunharaunda iyi mabasa kwete kuti pakambani iyi pashande vamwe vanhu vanobva kure pamabasa asinei nehunyanzvi.
Vagari ava vanoti nguva yose vainyunyuta nekutorerwa nzvimbo dzavaisirima izvo zvange zvopa kuti vamwe vagari vatamire kuMozambique sezvo vasisina pekurima.
Mumwe wevanhu vakatorerwawo munda wavaisirima donje, VaForget Hlomani, vanoti dzimwe mhuri dzichisisina pekurima dzava neminda kuMozambique uye vamwe vava kugara ikoko.
Kanzura we ward 28 kuChinyamukwakwa kunova ndiko kune vagari vakawanda vakatarisana nedambudziko rekutorerwa minda nekambani yeMacdom, Amai Miriam Mukombe, vanoti misangano yavanosiita nevekambani yeMacdom haina chayaibudisa uye vanovimba kuti sezvo VaTsvangirai vakataura nezvenyaya iyi pamwe chete nemutevedzeri wavo, VaArthur Mutambara, vanotarisira kuti matambudziko avo achapera.
Mukuru anoona nezvekubuda kwemashoko mukambani ye Macdom, Muzvare Lilian Muungani, havasi kubatika kubva nemusi weChishanu kuti tinzwewo divi re Macdom pamusoro penyaya iyi.